Bailiffs - isigaba abantu baphoqelekile ukugcwalisa isinqumo senkantolo. Njengabangaqondakali kungase kuzwakale, kwezinye izimo, bailiffs sidebeselele imisebenzi yabo, okungukuthi, musa ukulandela umyalelo wenkantolo. Kungenxa nalesi uhlobo lomkhuba nakuba ezweni lethu kungenziwa ihlangabezane cishe kuyo yonke indawo. Kulokhu, usizo kuphela isikhalazo esibhalwe kahle mayelana Ukungenzi lutho umsizi wesikhonzi senkantolo, owakhonza isikhulu esiphakeme kwenhlangano.
Kufanele kuqashelwe ukuthi kukhona amacala okuphambene, lapho amaphoyisa zilungele idlule amandla abo angokomthetho. Kaningi kukhona izimo ekuphileni lapho iyunithi umphakathi ngenxa yanoma yisiphi isizathu disintegrates. Nokho, emhlabathini uhlala nengane ukuzilwela odinga ukunakekelwa nokusekelwa abanye ngokwezimali. Kodwa abanye obaba ngizama ukugwema ukukhokha nesondlo ngamabomu. Nokho, Yiqiniso, icala is won, ukuthola ukusuka enkantolo budedengu kayise imadlana esivuna ingane ezimweni eziningi kuphela bailiffs. Futhi lapho kubulawa inkantolo, kuyadingeka futhi ukubambezeleka wokugcina yokungenzi isikhalazo umsizi wesikhonzi senkantolo.
Yini okufanele ukwazi isicelo ngaphambi ukulungiselela nokuzithoba lwezikhalazo
Ngaphambi bakhononde ngamamaki umsizi wesikhonzi senkantolo kufanele kube nokuqonda okuncane mayelana nomthetho okhona. Ngokwesibonelo, umthetho "Ngo Enforcement iziNyathelo", okungukuthi, Article 123 128, kusho ukuthi kungenzeka noma iyiphi umsizi wesikhonzi senkantolo isinyathelo sicelo.
isikhalazo Kuncono mayelana yokungenzi umsizi wesikhonzi senkantolo owakhonza induna umnyango, Ingasheshisa kakhulu inqubo ukuphoqelelwa lokwahlulela. Into nje okufanele yenziwe nakanjani - libekwe kahle isikhalazo wonke amaqiniso okwakuyoholela qinisekisa imisebenzi ukwephulwa umsizi wesikhonzi senkantolo.
Izikhathi ukuzicabangela uma ubhala isikhalazo
Ekulungiseleleni isicelo kufanele inake ukuthi ingabe umfakisicelo ubufakazi oqondile ezibonisa ngokugcwele ukuthi iphoyisa iphule imithetho komthetho. Uma ubufakazi obunjalo bungekho, iphoyisa kwisikhalazo kufanele sigcwaliswe nganoma yisiphi isikhathi, kodwa emva kwezinsuku kungekho engaphezu kweyishumi kusukela kuqale ukuthola zokuphula umthetho. Ukuxazulula izikhalo icala ifayela ngempumelelo kufanele kube ngezigaba, okuyilezi:
ekuqaleni isikhalazo phezu Ukungenzi lutho umsizi wesikhonzi senkantolo kufanele ahanjiswe senior office;
uma imiphumela ekhethekile engalandelwa, kubalulekile ukuya enkantolo;
uma ucabanga ngomphumela kuyoba encane, kubalulekile ukwenza ngesikhathi esifanayo Lodge izikhalazo ngezindlela ezimbili.
Yini okufanele aqukethe izikhalazo ifayela
Noma yimuphi isikhalazo idokhumenti luzokhishwa ngokubhala. Isikhalazo njalo mayelana izenzo umsizi wesikhonzi senkantolo oluqukethe idatha elandelayo:
isikhundla, kanye negama umsizi wesikhonzi senkantolo, lapho isikhalazo;
yonke idatha wesicelo, kungenjalo kufanele ukhombise Igama lenhlangano, kanye yonke imininingwane wangempela ke;
ukwethula zonke izizathu okungenzeka ukufakazela bonke emaqinisweni okungasekelwa kuwo futhi wanxusa isinqumo elihunyushwe umsizi wesikhonzi senkantolo.
Kuphela uma zonke izidingo umfakisicelo uzokwazi ukuba basebenzise amalungelo abo.
Isihloko idatha - ubani lo? Imvume siqu idatha kuncike
Russian elihamba asolwandle. "Black Berets": ukulungiselela
Uma uhudo umdlwane ...
Ibhokisi inhlangano "IZH Planeta 5": imiyalelo ezinemininingwane kanye nezeluleko isikimu